Agba nke egwurugwu n'usoro: ihe ha bu na otu esi eme ha 🌈 | Netwọk Mgbasa Ozi
Egwurugwu na agba
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ibili n'ụtụtụ wee hụ egwurugwu, eziokwu? Ihe omume a bụ otu ihe na-adọrọ mmasị, ọkachasị na ọ na-eme na Venus na ebe a, na mbara ụwa.
Olee otu esi hiwe ya? Kedu ndị Egwurugwu na agba n'usoro ka ha di kwa? Site na nke a na ọtụtụ ndị ọzọ Anyị ga-ekwu okwu ebe a, na nke a pụrụ iche, banyere otu ihe gbasara ihu igwe nke metụrụ ụmụ mmadụ aka taa.
1 Anya mmadụ, nke nwere ike ịhụ ihe ịtụnanya
2 gịnị bụ egwurugwu?
3 Gịnị bụ agba nke egwurugwu?
4 Mgbe ọ pụtara?
5 Enwere ike nwee egwurugwu okpukpu abụọ?
6 Ọchịchọ ịmata banyere egwurugwu
Anya mmadụ, nke nwere ike ịhụ ihe ịtụnanya
Iji ghọta ihe, otu esi etolite ya na agba nke egwurugwu a hụrụ, agaghị m achọ ịmalite edemede na-ebughị ụzọ gwa gị obere otú anya anyị si ahụ. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-adịrị gị mfe karị ịghọta ya na, n'ezie, oge ọzọ ị ga-ahụ ọzọ, ị ga-anụ ụtọ ya karịa.
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, anya mmadụ bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma nke okike (ee, ọbụlagodi na ị ga-eyi lenses kọntaktị). Anya anyị nwere mmetụta dị nro na ọkụ (nke site n'ụzọ, na-acha ọcha, ya bụ, ọ mejupụtara agba ndị na-acha uhie uhie, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ), mana ihe anyị na-egosi na anyị nwere otu agba bụ ihe ọzọ. N'ihi gịnị? Maka na ha na -enweta akụkụ nke ọkụ na-enwupụta na ihe ahụ, ma na-egosipụta akụkụ ọzọ pere mpe; N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na anyị ahụ ihe ọcha, ihe anyị na-ahụ n’ezie bụ agba ndị bụ isi nke ụdịdị dị iche iche gwakọtara, n’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ihe ahụ bụ oji, ọ bụ n’ihi na ọ na-amịpụta ụzarị electromagnetic nke ụdị a na-ahụ anya.
Kedu ihe bụ ụdịdị dị egwu? Ọ bụghị karịa ihe dị iche iche nke electromagnetic nke anya mmadụ nwere ike ịghọta. A maara radieshon a dị ka ìhè a na-ahụ anya, ọ bụkwa ihe anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụ ịmata ọdịiche. Otu anya dị mma ga-enwe ike ịzaghachi na ntụgharị dị iche iche site na 390 ruo 750nm.
gịnị bụ egwurugwu?
Ihe a mara mma na-eme mgbe ụzarị anyanwụ na-agabiga obere mmiri mmiri na-akwụsị na ikuku., si otú ahụ na-eke aak nke agba na mbara igwe. Mgbe ụzarị mmiri na-adọta ray, ọ na-agbaji ya na agba nke ụdịdị a na-ahụ anya, n'otu oge ahụ, ọ na-atụgharị ya; N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-emegharị ka ụzarị anyanwụ mgbe ọ na-abanye na nkedo na mgbe ọ na-apụ. Maka nke a, ntuhie ya na-agagharị ọzọ n’otu ụzọ mbata. Tụkwasị na nke ahụ, akụkụ nke ọkụ enyogharị ka ọ na-abanye na dobe na-egosipụta na ya, a na-enwetakwa ya ọzọ mgbe ọ na-apụ.
Ọ bụla dobe anya otu agba, ya mere a na-achịkọta ndị a hụrụ na ya, iji mepụta otu n’ime ihe ngosi kachasị mma nke okike.
Gịnị bụ agba nke egwurugwu?
na Egwurugwu na agba asawo, na agba mbụ nke egwurugwu na-acha ọbara ọbara. .B.ha pụtara n'usoro a:
Agba akwụkwọ ndụ. Green na-enye ụzọ ndị a na-akpọ agba agba.
Mgbe ọ pụtara?
Egwurugwu Ha na-eme n’ụbọchị mgbe mmiri na-ezo (ọ na-abụkarị igwe ojii), ma ọ bụ mgbe iru mmiri nke ikuku dị elu nke ukwuu. N'ọnọdụ abụọ ahụ, a na-ahụ kpakpando eze na mbara igwe, anyị ga-enwe ya n'azụ.
Enwere ike nwee egwurugwu okpukpu abụọ?
Egwurugwu ugboro abụọ abụghị ihe a na-ahụkarị, mana enwere ike ịhụ ha site n'oge ruo n'oge. A na-akpụ ha site na ụzarị anyanwụ nke na-abanye na ọkara nke ọkara nke ọdịda ahụ wee weghachite ha mgbe ha nyesịrị ụba abụọ n'ime. N'ime ime nke a, ụzarị ahụ na-agafe ma pụọ ​​na dobe na usoro ntụgharị, na-eme ka agba agba 7 nke egwurugwu pụta, mana ọ gbanwere. Nke abụọ yiri nke na-esighi ike karịa nke mbụ, mana ọ ga-adị mma karịa nke atọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ite abụọ dị n'ime ya enwere atọ.
Oghere na-hụrụ n'etiti arches a na-akpọ »Mpaghara Ọchịchịrị Alejandro".
Ọchịchọ ịmata banyere egwurugwu
Ihe omume a emeela kemgbe ọtụtụ nde na nde afọ, mana nke bụ eziokwu bụ na ruo narị afọ atọ gara aga ọ dịghị onye nwara inye ya nkọwa sayensị. Ruo oge ahụ, a tụlere ya na onyinye Chineke nyere ụmụ mmadụ mgbe Iju Mmiri ahụ zuru ụwa ọnụ (dịka Agba Ochie), a hụrụ ya dịka olu olu ga-echetara Gilgamesh nke ide mmiri ahụ (dịka "The Epic of Gilgamesh") nye ndị Grik ọ bụkwa chi nwaanyị ozi a na-akpọ Iris.
N'oge na-adịbeghị anya, na 1611, Antoinius de Demini wepụtara echiche ya, bụ nke René Descartes mechara nụchaa. Mana ọ bụghị ha gosipụtara echiche nke gọọmentị banyere nguzo egwurugwu, ma Isaac Newton.
Onye ọkà mmụta sayensị a nwere ike igosipụta site na enyemaka nke prism na ọkụ ọcha sitere na anyanwụ nwere agba ọbara ọbara, oroma, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, indigo na violet. Na agba nke egwurugwu.
You hụtụla egwurugwu abụọ? You maraworị ihe agba nke egwurugwu bụ?
Chọpụta igwe ojii Píleo, ụfọdụ ịma mma ya na agba nke egwurugwu:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Egwurugwu na agba
! ọ dị mma
Lee ka o si dị mma ịmatakwu banyere egwurugwu mara mma nke na-egosipụta agba ndị magburu onwe ha dị ka violet na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ mgbanaka ... .. ka a na-emepụta ya site na nkedo na-edozi ya na ray
Zaghachi Beatriz Bermudez
M na-amụ hermeneutics, na isiokwu nke agba dị ịtụnanya nye m, ihe okike nke anyanwụ na mmiri ozuzo na nkọwa sayensị ya. daalụ.
Zaghachi Yaqob Mizrahim Zarza.
ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara n'ụzọ sayensị, pigmenti nke agba nke egwurugwu.
N'ígwé nke .wa